१० लाखभन्दा बढी नगदमा कारोबार गरे जफत - समाचार - कान्तिपुर समाचार
१० लाखभन्दा बढी नगदमा कारोबार गरे जफत
श्रावण १, २०७४ कृष्ण आचार्य
काठमाडौं — तपार्इं कुनै ठूलो आर्थिक कारोबार गर्दै हुनुहुन्छ ? यदि हुनुहुन्छ भने आजदेखि नगदमा गर्न पाइँदैन ! १० लाख रुपैयाँभन्दा बढीको आर्थिक कारोबार गर्दै हुनुहुन्छ भने नगदमा नगर्नूस् । नगदमा कारोबार गरेको भेटिए तपाईंलाई सम्पत्ति शुद्धीकरण (मनी लाउन्डरिङ) निवारण ऐन २०६४ अनुसार कारबाही हुन सक्छ । ‘१० लाख रुपैयाँभन्दा बढीको कारोबार गर्नुछ भने बैंकिङ प्रणालीबाटै गर्नुपर्ने व्यवस्था गरेका छौं,’ सम्पत्ति शुद्धीकरण विभागका एक अधिकारीले भने, ‘अर्थ मन्त्रालय र राष्ट्र बैंकले छलफल गरी यसबारे राजपत्रमा सूचना प्रकाशित गरी कानुनसरह बनाइसकेकाले अब यस विरुद्धमा गए कारबाही हुनेछ ।’
कारोबार गरेको भेटिएमा उक्त रकम जफत गरी बिगो बराबरको जरिवाना हुनेछ । ‘यो ऐन वा यस ऐनअन्तर्गत बनेको नियम उल्लंघन गरेमा बिगो खुलेकामा बिगो जफत गरी बिगो बराबरको जरिवाना र बिगो नखुलेकामा १० लाख रुपैयाँसम्म जरिवाना हुनेछ,’ ऐनको दण्ड सजाय परिच्छेदको दफा ३० को उपदफा ९ मा भनिएको छ । विभागले पछिल्लो साता विभिन्न माध्यमबाट सार्वजनिक सूचना प्रकाशित गरी जानकारी गराइरहेको छ ।
विभागका अनुसार कुनै सम्पत्ति खरिदबिक्री, ऋण तथा सापटीजस्ता काम गर्दा १० लाख रुपैयाँभन्दा बढी भएमा बैंकिङ प्रणाली नै अपनाउनुपर्ने बाध्यात्मक व्यवस्था सरकारले गरेको हो । ‘मानांै तपार्इंसँग आज घरमा ११ लाख रुपैयाँ छ । तर कुनै कारोबारमा उक्त रकम भुक्तानी गरेको फेला परेमा कारबाही हुनेछ,’ त्यसो भए त्यो ११ लाख के गर्ने त ? ती अधिकारीले भने, ‘बैंकमा लगेर राख्ने । बैंकमा लगेर राख्न समस्या छैन । त्यसपछि चेक, अनलाइन बैंकिङ वा मोबाइल बैंकिङबाट भुक्तानी गर्ने ।’ नेपालभित्र कारोबार हुने जोकोहीका लागि यही व्यवस्था लागू हुनेछ । ‘विदेशीलाई समेत यही व्यवस्था लागू हुन्छ,’ उनले भने, ‘यसको अनुगमन सम्पत्ति शुद्धीकरण विभाग, राष्ट्र बैंक, अर्थ मन्त्रालय र प्रहरीले गर्नेछ । अन्य सरकारी निकाय र आम नागरिकले समेत स्वैच्छिक रूपमा अनुगमन र जानकारी गराउन सक्नेछन् ।’
राष्ट्र बैंकको परामर्शमा अर्थ मन्त्रालयले जारी गरेको राजपत्रको सूचनाअनुसार सम्पत्ति शुद्धीकरण निवारण ऐन २०६४ को दफा ४४ ग बमोजिम २०७४ साल साउन १ देखि लागू हुने गरी कुनै व्यक्ति, फर्म, कम्पनी वा संस्थाले एक पटकमा नेपाली रुपैयाँ दस लाख वा सोभन्दा बढी मूल्यको कुनै सेवा वा वस्तुको खरिदबिक्री तथा अन्य कारोबार गर्दा वित्तीय संस्था वा बैंकिङ प्रणालीमार्फत गर्नुपर्ने छ । अघिल्लो वर्षको मौद्रिक नीतिले ३० लाख रुपैयाँभन्दा बढीको कारोबार नगदमा गर्न नपाइने व्यवस्था गरेको थियो । त्यसभन्दा अघि यसको सीमा ५० लाख रुपैयाँ तोकिएको थियो । यी दुवै रकमभन्दा निकै कम १० लाख रुपैयाँभन्दा बढीको नगद कारोबार गर्न नपाउने व्यवस्था गरिएको हो । गत जेठ २५ गते सार्वजनिक भएको मौद्रिक नीतिले पनि १० लाखभन्दा बढीको कारोबार नगदमा गर्न नपाइने व्यवस्था गरेको छ ।
तर सीमाभन्दा बढी नगद रकम भुक्तानी दिनुपर्ने कुनै खास कारण देखिएमा सोको पुस्ट्याइँसहित नगदमा कारोबार गर्न उक्त नियमले बाधा नपुर्‍याउने व्यवस्था पनि गरिएको छ । तर सम्बन्धित व्यक्ति तथा संस्थाले बाध्यात्मक कारण भने खुलाउनुपर्ने छ । उक्त आधारमा बैंक तथा वित्तीय संस्थाले नगद कारोबार गर्न दिने व्यवस्था गरिएको छ । ‘तर यसलाई निकै झन्झटिलो र कठोर बनाइने छ,’ उनले भने, ‘वास्तविक समस्यामा परेकाले भने नगद कारोबार गर्न पाउने छन् ।’
तोकिएको सीमाभन्दा बढी हुने गरी कुनै पनि कार्य घरजग्गा खरिदबिक्री, व्यापार/व्यवसायदेखि दान–चन्दासम्म वित्तीय संस्था वा वित्तीय उपकरण प्रयोग गरी गर्नुपर्ने बाध्यता भएको हो । यसले मुद्रा छपाइ र हाल नेपाल राष्ट्र बैंकलगायत विभिन्न प्रकारका बैंक वित्तीय संस्थाको मुद्रा व्यवस्थापनमा देखिएको अत्यधिक लागत कम हुने अनुमान राष्ट्र बैंकको छ । गैरकानुनी कार्य तथा भ्रष्टाचारजन्य क्रियाकलापबाट आर्जित रकम संकलन, बाँडफाँड, प्रयोग र परिचालनसमेत नियन्त्रणमा आउने अपेक्षा छ ।
‘बैंकिङ प्रणालीमा भित्रिनुपर्ने बाध्यताले खातावालको अभिलेख, पहिचान र स्रोत खुलाउनुपर्ने छ,’ ती अधिकारीले भने, ‘यसले गैरकानुनी कमाइ निरुत्साहित गर्नेछ ।’ बैंकमा १० लाख रुपैयाँभन्दा बढी नगद जम्मा गर्दा स्रोत खुलाउनुपर्ने छ । यसबारे राष्ट्र बैंकको वित्तीय जानकारी इकाईले सूचना संकलन गर्ने र सम्पत्ति शुद्धीकरणसम्बन्धी अध्ययन गर्ने गरेको छ । हाल गैरकानुनी कमाइ नगदका रूपमा प्रयोग हुने भएकाले यो प्रणाली पनि प्रभावकारी हुन सकिरहेको थिएन ।
प्रकाशित : श्रावण १, २०७४ ०८:०९
राप्रपामा किन चुलियो विवाद ?
श्रावण १, २०७४ बालकृष्ण बस्नेत
काठमाडौं — एकता भएको ७ महिना कट्न नपाउँदै राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीका शीर्ष नेताबीच विवाद चुलिएको छ । सुरुमा डा. प्रकाशचन्द्र लोहनी एकीकृत राप्रपाबाट अलग भए, पार्टीको चुनाव चिह्नको विवाद उठाएर ।
अहिले अध्यक्ष कमल थापा र वरिष्ठ नेता पशुपतिशमशेर राणाबीच पनि मतभिन्नता बढेको छ ।
राप्रपामा यति छिट्टै किन बढ्यो विवाद । त्यसमा मुख्य तीन कारण रहेको नेताहरू औंल्याउँछन् ।
पहिलो कारण हो, कांग्रेस–माओवादी केन्द्र गठबन्धन सरकारमा सहभागी हुने कि नहुने । यस्तै, संसद्मा विचाराधीन संविधान संशोधन विधेयकलाई समर्थन गर्ने कि नगर्ने भन्ने दोस्रो कारण हो भने पुरानै विवाद एकीकृत राप्रपाको चुनाव चिह्न गाई लिने कि हलो भन्ने पनि तेस्रो कारणका रूपमा देखा परेको छ ।
यी विवादलाई संसदीय दलले सुल्झाउन नसकिरहेका बेला अध्यक्ष थापाले शुक्रबार ४२ जना केन्द्रीय सदस्य मनोनयन गरी निर्वाचन आयोगलाई जानकारी गराए । त्यसमा आफ्नो असहमति राख्दै राणाले कडा शब्दमा विज्ञप्ति निकाले । त्यसमा उनले राप्रपालाई ‘अध्यक्ष थापाको एकल बिर्ता’ को संज्ञा दिई उक्त मनोनयनको निर्णय फिर्ता नगरे पार्टीबाट अलग हुने चेतावनीसमेत दिएका छन् ।
राणाको यो चेतावनीपछि अध्यक्ष थापाले साउन ४ का लागि बोलाएको केन्द्रीय समिति बैठकसमेत अन्योलमा परेको छ ।
‘निर्वाचनको समीक्षा गर्न र अन्य राजनीतिक मुद्दामा साझा धारणा बनाउन केन्द्रीय समिति बोलाइएको हो । तर, वरिष्ठ नेता राणाबाट धम्कीपूर्ण विज्ञप्ति आएको छ,’ एकपछि अर्को चुनावी सन्दर्भमा पार्टीभित्र अनावश्यक मतान्तर हुनु दुर्भाग्य रहेको प्रतिक्रिया दिँदे प्रवक्ता सुशील श्रेष्ठले कान्तिपुरसित भने, ‘पार्टी विवाद समाधानका लागि ठोस निर्णय होला ।’
‘केन्द्रीय समितिमा छलफल गर्दा सबै विषयले किनारा पाउँथ्यो । यो तरिका राम्रो भएन,’ उनले भने । श्रेष्ठ पार्टी एक हुनुअघिदेखि नै अध्यक्ष थापाले नेतृत्व गरेको तत्कालीन राप्रपा नेपालका नेता हुन् । राणा पक्षीय नेताहरू भने केन्द्रीय समिति र संसदीय दल दुवैमा अल्पमतमा परेपछि थापाले आफूखुसी मनोनयन गरेको दाबी गर्छन् । ‘पार्टी अध्यक्ष आफ्नै नेतृत्वमा चाँडै सरकारमा जान चाहनुहुन्छ । संशोधन विधेयक पनि पारित गर्न चाहनुहुन्छ । तर पार्टीमा उहाँ अल्पमतमा हुनुहुन्छ । त्यसकै परिणाम यो मनोनयन हो,’ राणानिकट नेता शोभित उप्रेतीले भने । मनोनयन एकलौटी गरेको, राणासहितका नेतासँग सुझाव नमागिएको उप्रेतीको भनाइ छ । सरकारमा आउने/नआउने विषयमा सत्तारूढ कांग्रेस र माओवादी केन्द्रले प्रस्ट निर्णय गर्न थापालाई सुरुदेखि नै दबाब दिँदै आएका छन् । संशोधन विधेयकमा भने आफ्नै पार्टीका १० जना सांसदले खुलेर विरोध गरिरहेका छन् । अघिल्लो पटक संसद्मा विधेयकमा मतदानको तयारी गर्ने सन्दर्भमा राप्रपाका १० सांसद अनुपस्थित भएका थिए ।
तत्कालीन राप्रपा नेपालका २५ र राप्रपाका १२ गरी एकीकृत राप्रपासँग संसद्मा ३७ सिट छ । त्यसो त पार्टीको चुनाव चिह्नबारे राणाको अभिव्यक्तिलाई थापालगायत नेताले मन पराएका थिएनन् । स्थानीय तहको पहिलो चरणको चुनावी परिणाम आशा गरेअनुसार नआएपछि भक्तपुरको एक कार्यक्रममा नेता राणाले त्यसको एउटा कारण गाई चिह्न हुनु भनी प्रतिक्रिया दिएका थिए । लगत्तै दोस्रो चरण चुनावमा होमिनुपर्ने बेला दिएको यस्तो अभिव्यक्ति शोभनीय नभएको भन्दै अध्यक्ष थापा चिढिएका थिए । उनले शुक्रबार राजधानीमा भएको एक पार्टी कार्यक्रममा ‘एकता भएपछि पार्टी बलियो होला भन्ने लागेको थियो, तर साथीहरू कमजोर बनाउने खेलमा सक्रिय हुन थाल्नुभएको छ’ भन्दै असन्तुष्टि राखेका थिए । त्यो कार्यक्रममा राणा भने सहभागी थिएनन् ।
राजपा र साझा आयोगमा दर्ता
काठमाडौं (कास)– मधेस केन्द्रित ६ दल एकीकरण भएर बनेको राष्ट्रिय जनता पार्टी, नेपाल निर्वाचन आयोगमा दर्ता भएको छ । एक साताअघि नै दर्ताको निवेदन दिएकामा आयोगको शनिबार बसेको बैठकले राजपा, नेपाल दर्ता गर्ने निर्णय गरेको जानकारी निर्वाचन आयुक्त नरेन्द्र दाहालले दिए । उनले पार्टी दर्ता भए पनि चुनाव चिह्नबारे भने टुंगो नलागेको बताए । राजपाले छाता चुनाव चिह्न माग गरेको छ ।
आयोगमा दर्ता भएसँगै राजपाले आफ्नै पार्टीको नाममा चुनाव लड्न पाउँछ । तर, चिह्न भने पुराना ६ दलमध्ये कुनै एकको रोज्नुपर्नेछ ।
तराई मधेस लोकतान्त्रिक पार्टी, सद्भावना पार्टी, नेपाल सद्भावना पार्टी, राष्ट्रिय मधेस समाजवादी पार्टी, तराई मधेस सद्भावना पार्टी र मधेसी जनअधिकार फोरम (गणतान्त्रिक) बीच एकीकरण भएर वैशाख ८ गते राजपा नामक नयाँ पार्टी घोषणा भएको थियो ।
आयोगले शनिबारै रवीन्द्र मिश्र नेतृत्वको साझा पार्टीसहित ७ वटा दल दर्ता गरेको छ ।
चुनाव चिह्न : हलो कि गाई ?
सरकारमा : जाने कि नजाने ?
संशोधन पास : गर्ने कि नगर्ने ?
बालकृष्ण खाँड कांग्रेस प्रमुख सचेतक
अख्तियारद्वारा उपसचिवसहित तीनजनाविरुद्ध मुद्दा
आठ वर्षअघि एसएसबीबाट मारिएका नेपालीका परिवारलाई भारत सरकारबाट क्षतिपूर्ति
इटहरी, जनकपुर र बुटवलबाट श्रम स्वीकृति
चिताबाटै शव बरामद
इँटा उद्योगका मजुदर माथि गोली प्रहार